The scrap price cuts for high nickel pig iron compared with scrap. This week, the price of stainless steel fell, which led toadecline in the scrap market price. 304 scrap stainless steel fell by nearly 500 yuan/ton from the end of October. However, the high nickel pig iron is currently being pu...ဆက်ဖတ်ရန် »
The surface color of today's stainless steel screens is different from general color products. General color products can be made by spraying or water dyeing, but they are easy to fade and fade in the air or rain. The difference of the color stainless steel screen is that its processing technolog...ဆက်ဖတ်ရန် »
ဖန်သားပြင်၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာအထီးကျန်၊ အဖုံးနှင့်အလှဆင်ရန်ဖြစ်သည်။ အခန်းကိုအိပ်ခန်း၊ အစည်းအဝေးခန်းနှင့်လေ့လာခန်း၊ ဖန်သားပြင်များခွဲရန်လိုအပ်သည့်အခါအလှဆင်အပြင်အဆင်ကို သုံး၍ အခန်းကိုအဆင့်များစွာနေရာယူထားနိုင်သည်။ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ...ဆက်ဖတ်ရန် »
stainless steel hollowing process သည်လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းနည်းပညာကိုအသုံးပြုသည်။ လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းတွင်အကန့်အသတ်ရှိသည်။ အလွန်ထူသောပန်းကန်များကိုဖြတ်ရန်ခက်ခဲသည်။ အပြင်ဘက်အစွန်အဖျားသည်မညီညာဘဲဖားများသည်အဖြတ်တွင်ပေါ်လာလေ့ရှိသည်။ ၎င်းသည်အချိန်ကြာသော polishing နှင့် polishing လိုအပ်သည်။ ဒါဟာ ...ဆက်ဖတ်ရန် »
သံမဏိအထူးပုံသဏ္sheetာန်စာရွက်ပုံစံပြားများပြုလုပ်ရာတွင်အဓိကအဆင့်များမှာဖြတ်ခြင်း၊ ကွေးခြင်း၊ ကွေးခြင်း၊ ဂဟေဆော်ခြင်း၊ သံမှိုများ၊ ရေတွက်ခြင်းနှင့်မျက်နှာပြင်ပြုပြင်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ စာရွက်သတ္တုအစိတ်အပိုင်းများကိုပြုပြင်ခြင်းဖြစ်စဉ်မှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ ၁။ သံမဏိသံမဏိအထူးပုံသဏ္sheetာန်စာရွက်သတ္တုအစိတ်အပိုင်းများကိုရေးဆွဲပါ။ဆက်ဖတ်ရန် »
Stainless steel stairs are popular both indoors and outdoors, and it is also one of the most common stairs. What should we pay attention to when installing stainless steel stairs? 1. Precautions for installation of stainless steel stair poles 1. The installation of railings should be carried out...ဆက်ဖတ်ရန် »
ကမ္ဘာပေါ်တွင်အပါးလွှာဆုံးသံမဏိသည် ၀.၀၁၅ မီလီမီတာသာထူသည်
CCTV မှနောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာအရတရုတ် Baowu Taiyuan Iron and Steel Group မှထုတ်လုပ်သောနောက်ဆုံးပေါ် "hand-tear steel" သည်စက္ကူ၊ ကြေးမုံကဲ့သို့နှင့်အလွန်မာကျောသည်။ အထူသည် ၀.၀၁၅ မီလီမီတာသာရှိသည်။ သံမဏိစာရွက် ၇ ချပ်သည်သတင်းစာတစ်စောင်ဖြစ်သည်။ အထူ။ ဒီသတင်းကို ...ဆက်ဖတ်ရန် »
၁။ သံမဏိသံမဏိလိုင်းများ၏ဝိသေသလက္ခဏာများသံမဏိသံမဏိလိုင်းသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်မှု၊ သံချေးတက်ခြင်း၊ ရေစိုခံနိုင်ခြင်း၊ ပွန်းစားခြင်းခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း မျက်နှာပြင်သည်မှန်ကဲ့သို့ချောမွေ့သန့်ရှင်းသည်။ ၎င်းသည်အဆင့်မြင့်အလှဆင် ...ဆက်ဖတ်ရန် »
သံမဏိသံမဏိကိုသံချေးမဟုတ်ဟုဆိုသော်လည်း၎င်းသည်သံချေးတက်ခြင်းမရှိ။ ဂရုတစိုက်နှင့်ဂရုတစိုက်သုံးလျှင်၎င်းသည်တာရှည်ခံပြီးသံချေးမတက်နိုင်ပါ။ ဒါဆိုဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာမဆိုသံမဏိကသံချေးတက်ဖို့လွယ်ကူပါတယ်။ Entrepreneur Stainless ကမင်းကိုပြောပါစေ။ ပတ်ဝန်းကျင်ကအတော်လေးစိုထိုင်းနေတယ်ဆိုရင် ...ဆက်ဖတ်ရန် »
ရေခဲသေတ္တာ panel အတွက်သံမဏိသို့မဟုတ်အလူမီနီယံအလွိုင်းအတွက်ပိုကောင်းသည်
ရေခဲသေတ္တာ panel ကိုသံမဏိပိုကောင်း; သံမဏိ panel ၏အားသာချက်များ၊ ၁။ Corrosion resistance: သံမဏိပြားများသည်လေ၊ ရေငွေ့နှင့်ရေကဲ့သို့ပျော့ပျောင်းသော alkaline media များတွင်သံချေးတက်လိမ့်မည်။ ၂။ တာရှည်ခံနိုင်သောသံမဏိ panel တွင်အမာမြင့်၊ အကြမ်းခံပြီးပုံပျက်ရန်မလွယ်ကူပါ။ ၃။ Beau ...ဆက်ဖတ်ရန် »
ယခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်တွင်ကမ္ဘာ့ရေနံစိမ်းသံမဏိထုတ်လုပ်မှုသည်တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ၁၄.၄ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့သည်
မကြာသေးမီကကမ္ဘာ့သံမဏိအသင်း (WSA) သည်ဇွန်လအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသံမဏိကြမ်းထုတ်လုပ်ခြင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဇွန်လတွင်ကမ္ဘာ့သံမဏိအသင်း၏စာရင်းဇယားတွင်ပါ ၀ င်သောနိုင်ငံနှင့်ဒေသ ၆၄ ခုမှသံမဏိအထွက်သည်တန်ချိန် ၁၆၇.၉ သန်းရှိခဲ့ပြီးတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ၁၁.၆ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့သည်။ ပထမနှစ်ဝက်မှာ ...ဆက်ဖတ်ရန် »
JSPL ၏အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ Sharma ကအိန္ဒိယသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်သံမဏိအများဆုံးတင်ပို့သောနိုင်ငံဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်
Jindal Steel and Electric Power Company (JSPL) ၏အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ VR Sharma ၏အဆိုအရအိန္ဒိယသည်လာမည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းအိန္ဒိယကိုကျော်တက်ပြီးစွမ်းရည်ချဲ့ထွင်ခြင်း၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသံမဏိလိုအပ်ချက်နှင့်တရုတ်နိုင်ငံ၏တင်ပို့မှုကန့်သတ်မှုများတွင်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးသံမဏိတင်ပို့သူဖြစ်လာလိမ့်မည်။ "အိန္ဒိယဟာ ...ဆက်ဖတ်ရန် »